Orinasa fanamafisam-peo hovitrovitra, mpamatsy - Mpanamboatra efijery varotra ao Shina - Fizarana 2
Efijery roller azo ahitsy CGS banga
Ny efijery azo zahana CGS banga azo ovaina dia vokatra novolavolain'ny orinasanay ho an'ny famokarana pellet sinterlaorika. Ny zava-bitany dia nihatsara be raha oharina amin'ny tabilao nentim-paharazana. Izy io dia manana ny mampiavaka ny horonan-taratasy tsy miondrika, fotoana lava fanompoana ary milamina ary eny ambonin'ny velaran'ny roller aza. Fiara tokana dia raisina ho an'ny roller tsirairay.
Roller efijery dia fitaovana tena ilaina amin'ny rafitra fikirakirana arintany ny toby famokarana herinaratra. Izy io dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny crusher arintany ary mampihena ny fanjifana angovo sy ny fanamian'ny vy ny crusher arintany. Roller efijery manana adaptability malalaka amin'ny arina, indrindra ho an'ny arina misy ny hamandoana avo, izay tsy mora sakanana. Izy io dia manana ny mampiavaka ny firafitra tsotra, fandidiana miorina, tsy misy fihozongozona, tabataba ambany, vovoka kely kokoa ary vokatra lehibe.
Efijery azo ahodiana andian-tsarimihetsika Cfhs
Ny efijery Cfhs arc dia misy ny takela-by misy vy tsy misy fangarony, rindrina ary tohana. Misy zana-kazo mihodina afovoany eo afovoan'ny sarin'ny efijery, ary ny fefy lamba dia afaka mihodina 180 degre amin'ny axis rotation afovoany.
Sarimihetsika Zsl Cold Mine
Ny lalan'ny fivezivezena amin'ny efijery mihetsiketsika boribory CyA dia boribory, izay ampiasaina indrindra amin'ny fanasokajiana ireo fitaovana maina amin'ny fitafiana metallurgical, fanomanana arina, fitaovana fananganana, herinaratra ary indostria hafa.
ZSL andian-tsarimihetsika goavambe goavambe mangatsiaka mangatsiaka
ZSL andian-tsarimihetsika goavambe mangatsiaka goavambe mangatsiaka dia karazana efijery mitsivalana tsipika roa. Motera roa no mitondra ny exciter vibration ivelan'ny zoro fandefasana hanodina ny fihodinan'ny tena, izay mahatonga ny boaty efijery hamokatra hovitrovitra lehibe, ary tsy mandray anjara amin'ny hovitrovitra ny motera.
ZZSM andian-tsarimihetsika nopotsehina
ZSM andiam-sieve arintany mibaribary dia andiana efijery mihetsiketsika manokana novolavolaina arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fizotran'ny tsindrona lafaoro famafazana amin'ny fisavana arina. Ny arina miparitaka avy amin'ny rafitra fanindronana lafaoro nipoaka dia niditra tao amin'ny bunker arintany rehefa avy nandalo ny efijery mihetsiketsika arintany, izay afaka misoroka ny fako toy ny haben'ny sawdust sy ny fibre tsy hiditra ao amin'ny bunker arintany, ka miantoka ny fitaterana arina azo avy ao anaty fantsona.